Nagu saabsan - SmartFortune Packaging Co., Ltd.
SmartFortune Baako Co. Ltd waa soo saare daabacaadda & Baakadaha daabacaadda ee Shiinaha oo ku takhasusay soo saarista buugaag fara badan oo kala duwan, sanduuqyo qaas ah, bacaha warqadaha la adeegsado iwm. Waxaan ku sugnaa magaalada DongGuan, Gobolka GuangDong, Shiinaha; Waxay u dhowdahay HongKong, ShenZhen iyo GuangZhou, kaliya qiyaastii 1 saac baabuur.
Waxaan haynaa qiyaastii 360 shaqaale xirfad leh, oo ka faa'iideysanay khibradeena 25 sano, waxaan siin karnaa macaamiisha xal dabacsan qiimaha sicirka warshadaha iyo gaarsiinta degdegga ah ee albaabka.
1. Buugta daabacaadda qaaska ah: Buuggaagta adag, buugagga jilicsan, buugaagta muquuninta, buugga carruurta, Buugaagta carruurta, daabacaadda buugaagta, daabacaadda buugaagta adag, buugaagta wax lagu xidho oo dhammaystiran iwm.
2. Sanduuqa baakadaha ee khaaska ah: Sanduuqa Waraaqaha, Sanduuqa Hadiyadda, Sanduuqa Shukulaatada, Sanduuqa Macarons, sanduuqa qurxinta, kartoonka, sanduuqa jiingado, sanduuqa hadiyadda adag, Sanduuqa hadiyadda ee warqadda ah, sanduuqa baakadka warqadda iwm.
3. Bacda warqadda qaaska ah: Bacda warqadda Kraft, bacda warqadda hadiyadda ah, bacda wax lagu iibsado iwm.
4. Qalabka kale ee daabacaadda & baakadaha;
Machine Mashiinka daabacaadda Heideberg 5C
Machine Mashiinka daabacaadda ee Heideberg 4C
Land Mashiinka laba-midab leh ee Roland
● Spot UV mashiinka otomaatiga buuxa
Machine Mashiinka saxaafadda lagu dhufto
Machine Mashiinka baaruudda
Machine Mashiinka naxaasta oo badan oo shaqeynaya
Paper Mashiinka warqadda cadaadiska ku shaqeeya ee Haydarooliga
Cycle Mashiinka balaastigga sare ee mashiinka kulul
Machine Mashiinka mashiinka lagu xidho
● Khadka laynka ku xidha
Machine Mashiinka wareega wareega
Machine Mashiinka dharka
Machine Mashiinka isku laabma warqadda
Machine Mashiinka ku xidha xabagta
● Laba-duub oo isku-dhafan oo saxaafadda toosan uga booda
Buugga mashiinka lagu riixo
Machine Mashiinka dhajinta kiiska ee Semi-otomaatiga ah
Cut Qalajiyaha otomaatiga ah
Machine Mashiinka lakabyada dusha sare
Machine Mashiinka jarjarka mashiinka muunadaha
Shahaadooyinka: FSC, SGS, FDA, SEDEX ....
Waxaan soo saarnaa sanduuqa daabacaadda, bacda warqadda, buugta daabacaadda iwm sida loogu talagalay SWAROVSKI, BOSS, GUCCI, HARRODS, iwm.
95% dhoofinta ganacsiga, khibrad aad uwanaagsan u leh maraakiibta caalamiga ah, waxaan ka ogahay in ka badan kuwa kale sida loo badbaadiyo qiimaha dhoofinta macaamiisha wax soo saarka daabacaadda